ကျွနု်ပ်နဲ့ ဗေဒင် – Kaung Khant Min Tun
Kaung Khant Min Tun
Justanormal guy's blog
ကျွနု်ပ်နဲ့ ဗေဒင်	လူတော်တော်များများ လာမေးကြတာက ဗေဒင် ယုံသလားဆိုတာပဲ.. အခက်သားလား ဗေဒင် ယုံတယ် မယုံဖူးဆိုတာထက် ကိုယ့် အနေနဲ့တော့ ပုံမှန်အားဖြင့် အနာဂတ်ကိုလည်း ကြိုမသိချင်သလို အတိတ်မှာလည်း မနေချင်တာ အမှန်ပဲ
ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပဲ သူ့အလိုလို ကိုယ့်ကျမှ လာဖြစ်လာတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတွေကို ခပ်လွယ်လွယ်ကံလို့ ခေါ်ပြီး ထိန်းချုပ် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ့လို အခြေအနေတွေမှာ ကိုယ် လုပ်ချင်တာလေးတွေ ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကို လုပ်ပိုင့်ခွင့် ရှိတဲ့အတွင်းလေးထဲက ဘယ်လို ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲ တွေးလေ့ရှိတယ် ။ ဘာကြောင့် ကိုယ့်ကျမှ ကံဆိုးသလဲ ဆိုပြီးလည်း သိပ်ထွေထူးပြီး တွေးမနေဘူး ။ အော် ဒါ တိုက်ဆိုင်မှုပဲ ကံတရားလို့ပဲ သဘောထား ဖြစ်တာ ကြာပေါ့
ကိုယ့် အနေနဲ့ ဗေဒင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မယုံဘူးလို့ ပြောရခက်သလို ယုံတယ်လို့လည်း ပြောရခက်တယ် ။ ကိုယ့်ကို ဗေဒင် ဟောပေးတဲ့လူတော်တော်များများကတော့ တစ်ထပ်ထဲပဲ ဟောလေ့ရှိတယ် ။ အဲ့ဒီ့ထဲက မှတ်မိတာ တစ်ခု နှစ်ခု ပြောပြမယ် ။
ပထမဆုံး တစ်ခုကတော့ ဘယ်အရာနေနေ နှစ်ခွဖြစ်မယ်ဆိုတာပဲ :3 ပညာရေး လူမှုရေး အချစ်ရေးဆိုတာပဲ ဒါတော့ သိပ်မှန်တယ် ။ ကိုယ်ဟာ ပညာရေးနှစ်ခွဖြစ်ခဲ့တယ် ။ Civil Engineering နဲ့ Computer Science . ကိုယ်လုပ်ချင်တာ CS အိမ်က ဇွတ်ထားတာက Civil , Civil တက်ရင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် စာဖတ်ရတယ်။ အိမ်က ကိုယ်လုပ်ချင်တာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးလည်း Support မပေးဘူးကိုး သူတို့ အမြင်မှာ ကျောင်းစာမလုပ်ဖူးဆိုတာလောက်ပဲ မြင်တာ ဗေဒင်ဟောသလိုပါပဲ ကိုယ်ဟာ စက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ပညာရေးလမ်းကြောင်းမှာပဲ ဆုံးတယ်ဆိုတော့ အဲ့လိုပဲ ပြော၇မယ်ထင်ပါတယ် ။ သင်တန်း တက္ကသိုလ် ကောင်းကောင်းမတတ်ဖူးပေမယ့် ကိုယ်လက်ရှိ လုပ်နေတာတွေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Computer Science နဲ့ပဲ ဆက် လုပ်ဖြစ်တာပေါ့ ။
အဲ့လိုပဲ အမြဲလိုလို သမီးရည်းစား ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်း နှစ်ယောက်ကို ရွေးရဖို့ အမြဲဖြစ်သလို :3 လူမှုရေး စီးပွားရေး အဲ့လိုပဲတဲ့ ။ ဗေဒင်က ထပ်ဟောသေးတယ် ။ အဲ့လို နှစ်ခွဖြစ်တိုင်း မြွေမသေ တုတ်မကျိုးဖက်ကို ရွေးလေ့ရှိတယ်တဲ့ ။ စီးပွားရေးနဲ့ လူမှုရေးနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မြွေမသေ တုတ်မကျိုးက ဘာမှပြဿနာမရှိ ကောင်းတောင် ကောင်းသေးပေမယ့် အချစ်ရေးမှာတော့ အတော်ဂွကျတဲ့ ကိစ္စ . ရည်းစားနှစ်ယောက်ထားရင် ပိုက်ဆံ နှစ်ခါ ကုန်မှာဖြစ်သလို ပါးနှစ်ခါ အရိုက်ခံရကိန်းရှိတဲ့အပြင် ကံသိပ်နိမ့်သွားရင် မဘသနဲ့ တိုးပြီး ၇ နှစ် ငါးပိကြော်စားရကိန်းပါရှိသကိုး 😀 ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ မြွေမသေ တုတ်မကျိုးဆိုတာကလည်း အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိ မှန်ပါတယ် ( အချစ်ရေးကလွဲရင်ပြောတာ ) အမြဲလိုလို ကိုယ့်အတွက် နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေမယ့် လမ်းကို ရွေးလေ့ရှိတာ အမှန်ပဲ ။
နောက်တစ်ခုက အချစ်ရေးမှာ ရည်းစားများမယ်ဆိုတာပါပဲ ။ ဒီဟောကိန်းကို ငယ်ငယ်ကကြားတော့ အတော်တင်းတာ ကိုယ့်ရုပ်ကလည်း မချောတဲ့အပြင် ဆိုးတဲ့ ထဲမှာပါ တစ်ဖက်လှမ်းနေတော့ ခွမ်း ငါ့လို လူက ဘယ့်နှယ့် ရည်းစားများမလဲ အချစ်ဦးကလည်း ပစ်သွားခါစဆိုတော့ တစ်ယောက်တောင် ငါ့မှာ ထားသွားလို့ ပက်လက်လှန်ကျန်ခဲ့ပြီ မဖြစ်နိုင်တဲ့ ဗေဒင်တွေဆိုပြီး ထင်ခဲ့ဖူးတယ် ။ အခုများကျလည်း :3 ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး ။ ရည်းစားလိုချင်လို့ပတ်ရှာနေတာမဟုတ်ပေမယ့် အင်း… အဲ့ဒီ့ ဟောကိန်း မှန်သင့်သလောက် ( အနည်းငယ် ဟိ ဟိ ) မှန်သလိုလိုပဲပေါ့ဗျာ
စိတ်ထဲမှာ မှတ်မှတ်ရရ ရှိတာ ဒါလောက်ပဲ ဆိုပေမယ့် တချို့ တိုက်ဆိုင်တယ်ပြောရမလား မှန်တာလေးတွေရှိပါသေးတယ် ဥပမာ အမျိုးသမီး အကြီးအကဲတွေကို အမေတွေကို ပိုချစ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါလည်း ကိုယ်က အမေချစ်သားဆိုတော့ ။
ပြန် နိဂုံးချုပ်ပြီး ဖြေရရင်တော့ ဗေဒင် ယုံသလား မယုံဘူးလားဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ပဲ ဖြေရမှာပဲ ။ အိမ်က ဇွတ်မေးခိုင်းရင် သွားမေးပေးလိုက်ပီး ဖတ်လိုက်တယ် ။ အော် ဒါလား အင်းအင်းပေါ့ . မှန်တယ်တော့ လို့ ပြောကြရင်လည်း အင်း မှန်တယ်ပေါ့ ဟုတ် ဟုတ်ပေါ့ အင်းလေ ကိုယ်က အဲ့ ဒီ့ ဗေဒင်က ဒီလထဲ ခရီးမသွားရဘူးဆိုတာနဲ့တင် အလုပ်အရေးကြီး ကိစ္စတွေ ဖျက်ပြီး ခရီးမသွားမယ့်ကောင်လည်း မဟုတ်သလို ( ဒါပေမယ့် ကားပေါ်မှာတော့ ခါးပတ်ပတ်သွားကောင်းသွားမယ် :3 ) ယတြာတွေ ပတ်ချေ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့လူလည်း မဟုတ်ဘူး ။ ဗေဒင်ဆရာက သူ့ဟာသူဟောတာ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်စရာရှိတာတွေ ( ဘာဖြစ်ဖြစ် ) လုပ်နေဦးမှာ ။ ကိုယ့်နဲ့ ဘာဆိုင်တာလိုက်လို့
I code.I commit.I read.I write.I play.I eat.I sleep.	View all posts by Kaung Khant Min Tun	Format QuotePosted on April 19, 2016Author Kaung Khant Min TunCategories Myself	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website Post navigation
Previous Previous post: ကျွနု်ပ် နှင့် မဟာ သင်္ကြန်